Wednesday March 15, 2017 - 08:29:00 in Wararka by Super Admin
Sheekha Caalimka ah Xassaan Xuseen Aadam (Abuu Salmaan) oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ee xaqqa bayaaniya ayaa ugu baaqay muslimiinta in ay ka qeyb qaataan gurmadka abaaraha ee dalka ka socda.
Kalimad kooban oo uu sheikh Xassaan Jeediyay ayuu ku sheegay in ugurmashada dadka abaaraysan ay tahay waajib oo aysan aheyn sadaqo isagoo ku baaqay in lala jihaado ciddii hanti haysata ee diida in loogurmado dadka macluushu dhibaataysay.
Dadka hantida haysta ayuu ugu baaqay in ay iimaankooda iyo gobanimadooda ilaaliyaan oo ay badbaadiyaan dadka abaaraha u dhimanaya.
Allaha dhowree Sheekh Xassaan Xuseen ayaa muslimiinta uga digay in hantidooda ay u dhiibaan hay’ado shisheeye iyo dad aan muslimiin aheyn.
"Waxaase aad iyo aad in laysaga ilaaliyo u haboon lagana digtoonaado waxaa laga yaabaa in wadaado masaajiddo ka istaagaan hanti badana muslimiin laga uruuriyo kadibna waaga dambe gacanta loo geliyo hantidaa iyada ah hay’ado aan islaam aheyn, hadda ka horna way dhacday haddana in ay dhacdaa dhici karta, waxaa dhici karta hanti muslimiin intii la aruuriyo oo layiraahdo muslimiinbaa lagu badbaadin in murtadiin iyo dad aan islaam aheyn gacanta loo geliyo kadibna aan laga warqabin meel ay ku dambeysay” ayuu yiri Sheekh Xassaan.
dadka gurmadka sameynaya ayuu kula taliyay in ay iska fiiriyaan cidda ay u dhiibayaan hantidooda "Muslimiinta hala badbaadiyo oo haloo gurmado shilinka aad ugu gurmanaysaana meesha uu ku baxaayo hala hubsado ilaaheyna halaga cabsado” ayuu sheikh xassaan warkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Halkan ka degso Baaqa Sheekh Xassaan ama Hoos Ka Daawo